(ရွှေသာလျောင်းဘုရား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ရွှေသာလျောင်းရုပ်ပွားတော်ကြီး( [ʃwèθàljáʊɴ pʰəjá]) သည် ပဲခူးမြို့ အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသော လျောင်းတော်မူ ရုပ်ပွားတော်ကြီးဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားကြီး ထားဝယ်မြို့ရှိ လျောင်းတော်မူဘုရားကြီးပြီးလျှင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဒုတိယအကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူ ဘုရားဖြစ်ပြီး အလျားအားဖြင့် ၅၅ မီတာ(၁၈၀ ပေ)နှင့် အမြင့် ၁၆ မီတာ( ၅၂ ပေ) ရှိသည်။ ထိုဘုရားကြီးကို မွန်ဘုရင် မဂ္ဂဒီပ က သက္ကရာဇ် ၉၉၄ ခုနှစ်တွင် တည်ထားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့က ပဲခူးမြို့အား ကိုလိုနီအဖြစ်သွတ်သွင်းပြီးနောက် ဘုရားကြီးမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရသည်။ ၁၈၈၀ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအနီးတစ်ဝိုက်အား ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် တူးဖော်ခဲ့စဉ် ခြုံနွယ်မြက်ရိုင်းများအောက်မှ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးများ စတင်ခဲ့ပြီး ဘုရားခေါင်းအုံးတော်(ဘယ်ဘက်အခြမ်း)အား ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ရုပ်ပွားတော်အပေါ်မှ သွပ်မိုး၊ အကာများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုပြုပြင်ရေးအတွက် အများပြည်သူများက အလှူငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
၉၉၄; ၁၀၂၆ နှစ် အကြာက (၉၉၄)
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၇၅။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေသာလျောင်း_ရုပ်ပွားတော်ကြီး&oldid=518026" မှ ရယူရန်